ဒစ်ပလိုဒိုကတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
Temporal range: Late Jurassic (Kimmeridgian), 154–152 Ma
Mounted D. carnegii (or "Dippy") skeleton at the Carnegie Museum of Natural History; considered the most famous single dinosaur skeleton in the world.
(Gillette, 1991) (originally Seismosaurus)
ဒစ်ပလိုဒိုကတ် (အင်္ဂလိပ်: Diplodocus) သည် ဆော်ရိုပေါ့ (Sauropod)အုပ်စုမှ ဒိုင်နိုဆောတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဂျူရာဆစ်ယုဂ်နောက်ပိုင်းတွင် ကျက်စားခဲ့၏။ ၎င်းသည် ဆော်ရိုပေါ့အုပ်စုများတွင် အကြီးမားဆုံးသတ္တဝါဖြစ်သည်။ သေးသွယ်ရှည်လျားသော ခန္ဓာကိုယ်သည် ၂၅ မီတာထက်ပိုရှည်သော်လည်း ၁၀ တန်ခန့်သာလေး၏။ အမြီးအလွန်ရှည်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အရှည်၏ ထက်ဝက်ခန့်ရှိသည်။ သေးသောဦးခေါင်း၊ သေး၍တုံးသောသွားများနှင့် ဆော်ရိုပေါ့အုပ်စုမှ အခြားဒိုင်နိုဆောများမှာကဲ့သို့ရှည်လျားသောလည်တိုင်ပါရှိသဖြင့် ဦးခေါင်းကိုပေါ်ရုံမျှဖော်၍ ရေထဲဆင်းနေနိုင်သည်။
↑ Ulrich Merkl (November 25, 2015)။ Dinomania: The Lost Art of Winsor McCay, The Secret Origins of King Kong, and the Urge to Destroy New York။ Fantagraphics Books။ ISBN 978-1-60699-840-3။ Although it narrowly failed to win the race with the New York Museum of Natural History in 1905, the Diplodocus carnegii is the most famous dinosaur skeleton today, due to the large number of casts in museums around the world
↑ Breithaupt, Brent H, The discovery and loss of the “colossal” Brontosaurus giganteus from the fossil fields of Wyoming (USA) and the events that led to the discovery of Diplodocus carnegii: the first mounted dinosaur on the Iberian Peninsula, VI Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno, September 5–7, 2013, p.49: "“Dippy" was and still is the most widely seen and best-known dinosaur ever found."
↑ ကလေးသူငယ်များအတွက်သုတရတနာသိုက်။ ကမ္ဘာဦးသက်ရှိများ။ ၁၉၈၄။
ဤ ဒိုင်နိုဆောနှင့်သက်ဆိုင်သော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒစ်ပလိုဒိုကတ်&oldid=721360" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။